Oluzenzekelayo 2 iziqwenga tin can ipensile ibhokisi yokwenza oomatshini, China Ngokuzenzekelayo 2 iziqwenga tin can ipensile ibhokisi yokwenza oomatshini abavelisi, abaxhasi, Ifektri - G STAR Ukurhweba LIMITED
Ikhaya>Tin Ukwenza Machine
Zenzekelayo iziqwenga ezi-2 tin zinokwenza ipensile koomatshini bokwenza ibhokisi
Inani Model: TM0001
Isixa esincinci soMyalelo: 1 Set
Iinkcukacha zoPakethe: Ityala lemihlaba
Ixesha lokuzisa: Malunga ne-45days
Supply Ukubanako: 1000sets ngenyanga
Ukulungele ukuvelisa iinkonkxa ezibini
● Inani lezikhululo linokumiselwa ngokweemfuno zabathengi, kwaye ukuya kuthi ga kwizikhululo ezintandathu zinokufakwa isitampu ngaxeshanye ukunciphisa iindleko zabasebenzi kunye nokufezekisa ukusebenza ngokukuko.
● Yamkela inkqubo yokulawula umbane yaseJapan kunye neMitsubishi servo motor.
● Iscreen sokuchukumisa lujongano lwesiTshayina, kulula ukusebenza, kulula ukulungisa ingxaki, kwaye iservo motor isetyenziswa njengesixhobo sokuqhuba, kwaye ukondla kuchanekile:
● Esi sixhobo sixhotyiswe ngesixhobo sokukhusela isivamvo sombane kunye nenkqubo yealam. Ukuba izixhobo zifunyenwe zinempazamo, ziya kuyeka ngokuzenzekelayo kwaye zivakalise ialam kwaye zibonise indawo enesiphene kwiscreen sokuchukumisa.
● Izixhobo zixhotyiswe ngenkqubo yokuthanjiswa okuzenzekelayo ukuqinisekisa ukusebenza kwexesha elide kwezixhobo.
● Ngokomgaqo weepunch mechanics, amandla okuxhobisa izixhobo ayanda.
● Ngokomgaqo wokukhuphisana wenqindi yesantya esiphezulu, ukuzinza nokuzinza kweenqindi eziphezulu nasezantsi kuphuculwe.
● Iinqindi ezingaphezulu nezisezantsi zenziwe zanemingxunya emithathu yokufa ngokulandelelana. Ngokwakhiwo kwemveliso, ukubetha ngokungxama okanye ukubetha kabini kukufa kunokukhethwa
Amandla imveliso imveliso ngenqindi eyodwa 20pcs / min-50pcs / min
Amandla imveliso imveliso Punch kabini 40pcs / min-100pcs / min
Ukondla iservo motor 600W
Ulawulo lwe-PLC I-FXIN60MT
ubungakanani Machine 4000XXUMXX655mm
ubunzima Gross 4000kgs
Zenzekelayo 2 Pieces Tin ukwenza umatshini uyakwazi ukwenza iziqwenga ezi-2 ngeenxa zonke tin iibhokisi uxande ipensile amatyala tin, iti can container. Yondla ngokuzenzekelayo kwaye yenze imilo yetin oyifunayo. Inokwenza ubungakanani obahlukeneyo beebhokisi zeetoti ngokutshintsha ukusweleka. Ingagcina imisebenzi kunye nokusetyenziswa kwamandla okuncinci.